Xashiishadda caafimaadka waxay raasumaal u siin kartaa beeralayda Westland • Dawooyinka Inc.eu
Xoolaha iyo xanaanooyinka ee Westland ayaa seegay balaayiin sababtoo ah looma oggola inay koraan waraabinta daawada. Haddii ay helayaan oggolaansho si ay u koraan cawska, taasi, waxay yiraahdeen, waxay kordhinayaan wax-soosaarka beeralayda Westland shan goor oo ah 40 bilyan. Taasi waa sababta ay Rutte weydiistay isbedel ku yimid sharciga iyo xeerarka.
1 Tartanka qeybta dhirta
2 Dib u cusboneysiin
3 Dhinaca xadka
4 'Iftiinka cagaaran'
Dalkeena raha 'cagaaran', beerashada xashiishadda waa la ciqaabi karaa. Si kastaba ha noqotee, balaayiin ayaa laga sameeyaa Kanada iyo qaybaha kale ee adduunka iyada oo laga soo bilaabo abuurista sharciga ah ee xashiishka. Nederland waxay safka hore kaga jirtaa adduunka markay tahay koritaanka iyo koritaanka guryaha lagu koriyo. Wax kasta oo halkan jooga waxay ka yimaadaan 'dhulka'. Noocyo badan oo ubaxyo ah iyo khudaar ayaa si guul leh u koray inkasta oo cimiladu is beddeli karto. Kanada, halkaasoo sharciyeynta xashiishadda ay tahay mid sharci ah, sidaa darteed waxay ku mahadsan tahay inay adeegsato aqoonteenna si ay balaayiin uga sameyso warshadaha xashiishadda sharciga ah.
Tartanka qeybta dhirta
Intaa waxaa dheer, tartan badan ayaa ka imanaya waddamo kale, ayuu yidhi Wouter Kuiper, oo ah agaasimaha shirkad weyn oo lagu beero dhirta lagu koriyo. “Waxaan leenahay wax soo saar xad dhaaf ah waxaanan la kulannaa tartan miro iyo qudaar dalal kale ka yimid. Waxaa la joogaa waqtigii aan mar kale heli lahayn badeecad uu beerreyda reer Holland wax ka kasban karo, ayuu ku yiri NOS. Soosaaraha Marco Smit ayaa intaas ku daray: “Waxaan halkaan ku heleynaa fursado badan iyo dhammaan aqoonta gudaha ku jirta si aan uga dhigno wax soo saar wanaagsan. Caqabada kaliya ayaa ah xeerarka. ”
Dib u cusboneysiin
Haddii beerista miraha dawada ah ayaa weli mamnuucaya miisaan ballaadhan, aqoonta Nederlandku way ka baxaysaa dibedda sida haragga qorraxda. Kanada iyo wadamo kale oo isticmaala madadaalo, beerashada iyo iibinta waa la sharciyeeyay. Nederland, oo markii hore loo yaqaano siyaasad daroogo ah, ayaa ka soo baxaysa talaabo. Taasna waa sababta ay u dhisteen dhirta kululeeyayaasha Holland, beeralayda iyo shirkadaha iftiinka ah ee raadinaya dibedda.
Tusaale ahaan rakibidda Peter Dekker, oo soo saarta qiyaastii 35% ka mid noqoshadeeda Kanada. Shirkaddu waxay siisaa shaashado si ay u nidaamiso nalka guryaha lagu koriyo. Waad ku mahadsan tahay iftiinka iftiinka wanaagsan, dhirta si dhakhso leh ayey u koraan. "Waan sameyn karnaa, waana wax laga xishoodo oo laguma sameyn karo lagamana yeeli karo Nederland," ayuu yiri milkiilaha iska leh Jan Vellekoop. Khibradda Nederlandka ayaa si ba'an loogu baahan yahay halkaas. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in laga shaqeeyo halkaas: waa inaad qaadataa koorsooyin oo aad haysataa rukhsad.
Kuwa beeralayda ah ayaa rajeynaya maanta in ay helaan iftiinka cagaaran oo ka yimid Raysalwasaaraha ee beerista Medietka. Waqtigan xaadirka ah, weelka wax soo saarku waa Boosrocaan waa kan kaliya ee ballaaran, sharci yaqaan ah. Shirkad bilyan oo dollar ah, oo ay aasaaseen Tjalling Erkelens, ayaa ka shaqeeya wakaaladda dawladda ee Medicinal Cannabis.
Akhri wax dheeraad ah nos.nl (Xigasho)
Shirkad hoosaad ka ah shirkadda weyn ee NYSE ee ganacsiga ka ganacsata ee Teva Pharmaceuticals ayaa heshiis la gashay daawada ...
Coronavirus wuxuu xannibayaa wadooyinka ka ganacsiga maandooriyaha wuxuuna carqaladeynayaa qeybinta
Soosaarayaasha kookaha ee reer Kolombiya waxay leeyihiin shidaal yari u baahan soo saarista ...
Waa maxay cannabichromene maxaase loo isticmaali karaa?
Cannabichromene (CBC) waa cannabinoid aan sakhraansanayn. Ma soo saarto sarre sare sida THC ...